Deodorants နှင့် Antiperspirants များ၏သမိုင်း
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Deodorants များ၏သမိုင်း
mum ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ် underarm deodorant ခဲ့သည်
mum deodorant ယေဘုယျအားပထမဆုံးစီးပွားဖြစ် deodorant ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ဒါဟာတီထွင်တဲ့သူမသိရပါဘူး။
deodorant ၏ထွန်းကားမီ, လူတွေယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏ထိုးစစ်ရေမွှေး (ရှေးဟောငျးအီဂစျြလူနှင့်ဟေလသလူတစ်ဦးအလေ့အကျင့်ချိန်းတွေ့) နဲ့သူတို့ကိုဖုံးကွယ်ထားကြောင်းခြင်းဖြင့်အနံ့တိုက်ပွဲတွေ။ အမေ deodorant ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့ကတကယ်တော့တီထွင်သူရဲ့နာမညျကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရထားပြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုပ်စပ်သောအနံ့ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးချွေတာဘို့ကျေးဇူးတင်ဖို့ဘယ်သူကိုမသိရပါဘူး 1888. အတွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်သို့ရောက်လာသောအခါ, ဒါကပြောင်းလဲသွားတယ်။
ကြှနျုပျတို့သိဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို Philadelphia တွင်-based တီထွင်သူသည်သူ၏တီထွင်မှုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်မေ၏နာမတော်အောက်မှာကသူ့သူနာပြုကနေတဆင့်ဖြန့်ဝေသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
mum လည်းယနေ့ဆေးဆိုင်များတွင်တွေ့ရသော deodorants နှင့်အတူဘုံ၌အလွန်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးမုန့်လက်ချောင်းအားဖြင့် underarms မှလျှောက်ထားအဖြစ်ယနေ့လိပ်-on ကပ်သို့မဟုတ် Aerosol deodorants မတူဘဲ, အဇင့်-based မေ deodorant မူလကရောင်းချခဲ့သည်။
နှောင်းပိုင်း 1940 ခုနှစ်, ဟယ်လင်ဘား Diserens ဟာအမေထုတ်လုပ်မှုအသင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကအကြံပြုချက်တခု newfangled တီထွင်မှုဟာကိုခေါ်ကဲ့သို့တူညီသောနိယာမအပေါ်အခြေခံတစ်ခု underarm deodorant ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟယ်လင်မှုတ်သွင်း ကဘောဘောပင် ။ deodorant Applications ၏ဤအသစ်ကအမျိုးအစား 1952 အတွက် USA တွင်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ဘန်ကီမွန်းက Roll-တွင်၏နာမတော်အောက်တွင်စျေးကွက်ခဲ့သည်။
Deodorants အနံ့ဂရုစိုက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အလွန်အကျွံချွေးစောင့်ရှောက်တာမှာအဖြစ်ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ပထမဦးဆုံး antiperspirant ရုံ 15 နှစ်အခင်းဖြစ်ပွားရာပေါ်သို့ရောက် လာ. , 1903 ခုနှစ်စတင်ရာ Everdry, ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့နှင့်ချွေးတားစီးဖို့လူမီနီယမ်ဆားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားအစောပိုင်း antiperspirants သို့သော်အရေပြားကိုယားယံစေခြင်းနှင့် 1941 ခုနှစ်တွင် Jules Montenier ယားယံလျှော့ချနှင့်အရာ Stopette အဖြစ်စျေးကွက်ထိမှန်ကြောင်း antiperspirant တစ်ဦးထက်ပိုသောခေတ်သစ်ရေးဆွဲရေးမူပိုင်ခွင့်။
ပထမဦးဆုံးအ antiperspirant Aerosol deodorant 1965 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်သို့သော် antiperspirant မှုန်ရေမွှားများကြောင့်ကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှလူကြိုက်များဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း, ယနေ့ deodorants နှင့် antiperspirants လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းကပ်။
အဆိုပါ Mousetrap ၏သမိုင်း
အဆိုပါ Gatling Gun ၏သမိုင်း
ဆိုနီမှအသစ် Walkman များ၏သမိုင်း
ကွန်ပျူတာအရံပစ္စည်းများ၏သမိုင်း: အ Floppy Disk ကို မှစ. CD များမှ
Lopez - အမည်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မူလအစ
Samhain Folklore - ဟယ်လိုအယူသီးနှင့် Legends
ကုရ်အာန်သိပ္ပံနှင့်အချက်အလက်အကြောင်း Says ကဘာလဲ
အပြည့်အဝပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: 2007 ခုနှစ် BMW ကားက F 800 ST, BMW ကားရဲ့ Middleweight မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်များအတွက်
ဆီးရီးယားတွင် Mesopotamian Capital ကို - Brak ကိုပြောပြပါ
မှန်ကန်စွာရွေးချယ်စကားရှာဖွေခြင်းတို့အတွက် 10 သိကောင်းစရာများ
Bluegills မှာ In-Depth မျှော်
ESL သင်ကြားများအတွက်အခြေခံအင်္ဂလိပ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း - Grammar
သင့်ရဲ့ Voice ကို Project ကိုဘယ်လို